MB 2016 Sebtember, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Qoraalka Cibraaniga ee Laawiyiintii 3:23,24 maalinka waxaa loo bixiyay "Sikron Terua", oo macnaheedu yahay "xuska maalinta xuska buunka". Tani waa sababta maalintani badanaa loogu yeero Bandhigga Khudbadaha Trump ee Ingiriisiga. Rabbaaniyiin badan ayaa baraya in shofar (trombone laga sameeyay gees gees) la afuufay ugu yaraan 100 jeer, oo ay kujirto taxane 30 jeer ah, si loo muujiyo rajada Masiixa imaatinka Rosh Hashana. Waxaan hayaa Shofar waana kuu sheegi karaa inay aad u adag tahay in cod la wadaago. Waxaan akhriyey in Rosch Haschana Festdienst inay caado u ahayd in la helo bedel tababbaran haddii kii hore uusan awoodin inuu afuufo lambarka loo baahan yahay ee calaamadaha buunka.
Sida laga soo xigtay ilo Yuhuudi ah, waxaa jira seddex nooc oo beep ah oo la afuuftay maalintaas:
Teki'a - cod dheer oo is daba joog ah oo astaan ​​u ah rajada xoogga Ilaah iyo ammaanta in isagu yahay Ilaaha (Israa'iil),
Shevarim - saddex dhawaaqyo gaaban oo isdaba joog ah oo tilmaamaysa qaylada iyo ka dhawaajinta dembiyada iyo bini-aadamka dhacay,
Teru'a - sagaal soon oo degdeg ah, codad qalafsan oo la mid ah (oo la mid ah dhawaqa qaylodhaanta qaylo dhaanta) si ay u soo bandhigaan qalbi jabka kuwa Ilaah hortiisa yimid.
Marka laga hadlayo Teru'a, Talmud wuxuu leeyahay: "Haddii uu jiro xukun ka yimid xagga hoose (qalbi jaban) uma baahnid xukunka xagga sare". Macallin Moshe Ben Maimon (oo loo yaqaan Maimonides), laga yaabee inuu yahay aqoon yahanka Yahuudda iyo macalinka ugu da'da weyn, wuxuu ku darayaa heerarkan soosocda ee muhiimka ah:
Kuma filna in Ilaahay keligiis yahay boqorkayga. Haddii aadanuhu oo dhami aanu u aqoonsanayn inuu yahay Boqorka, markaa wax baa ka dhiman cilaaqaadka aan la leeyahay Ilaah. Waa qeyb ka mid ah jaceylka aan u qabo Ilaaha Qaadirka ah in aan qof walba ka caawiyo sidii uu u aqoonsan lahaa. Dabcan, tani waa inta badan muujinta walaacdayda qotada dheer ee dadka kale. Laakiin sidoo kale waxay saameyn ku leedahay fahamkayga aniga ku saabsan xukunka boqornimada ee Ilaahay ee kuxiran.
[Afuufayo lafta jeexjeexa - sawir ballaadhan] Reer banii Israa'iil hore waxay asal ahaan u adeegsadeen turumbooyin buunankoodii; waqti ka dib, sida aan ka baranno Lambarrada 4, kuwan waxaa lagu beddelay turumbooyin (ama buunanno) lacag laga sameeyey. Isticmaalka trombones ayaa lagu xusay 10 jeer Axdiga Hore. Waxaa lagu afuufayay munaasabado kaladuwan: in la digtoonaado markay qatar ku jirto, inay dadka ugu yeeraan xaflad ciid ah, inay ku dhawaaqaan ogeysiisyo, iyo sidii wacdin cibaadada. Waqtiyada dagaallada, buunka waxaa loo adeegsan jiray in askartu loogu diyaariyo hawlgalkooda ka dibna ay siiso calaamadaha hawlgallada dagaalka. Imaatinka boqorka ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay turumbooyin afuufa.
Maalmahan, Masiixiyiinta qaar waxay u dabaaldegaan maalinta buunka sidii maalin ciid ah oo adeegyo badanaana la isugu daro tan iyada oo loo tixraaco dhacdooyinka mustaqbalka - imaatinka labaad ee Ciise ama rayrayntii kaniisadda. Si kastaba ha noqotee, sifaha macno leh ee fasalladaan ayaa laga yaabaa inay yihiin, waxay iska indhatirayaan xaqiiqada ah in Ciise uu horay u fuliyay wixii iiddu xustay. Sida aan ognahay, axdigii hore ee ku soo daray maalinta Trump wuxuu ahaa ku meel gaadh. Waxaa loo adeegsaday in lagu shaaciyo Masiixa imaatinka dadka. Magacyadiisu waa nebi, wadaad, nin xigmad leh iyo boqorka. Buunka afuufaya Rosh Hashana ma aha oo keliya calaamadaha bilowga jadwalka dabbaaldegga sannadlaha ah ee reer binu Israa'iil, laakiin wuxuu sidoo kale ku dhawaaqayaa farriinta maalinta xafladan: "Boqorkeennu waa imanayaa!"
Aniga ahaan, qaybta ugu muhiimsan ee maalinta buunka waa sida uu u tilmaamayo Ciise iyo sida Ciise u fuliyay tan markii ugu horreysay: isaga oo ah jidhkiisii, shaqadiisii ​​dib u heshiisiinta, dhimashadiisii, sarakiciddiisa iyo u dabbaaldeggiisii. Iyada oo loo marayo “dhacdooyinkaas nolosha Masiixa”, Ilaah keli kuma oofin oofin axdigiisii ​​uu la galay reer binu Israa'iil (axdi hore), laakiin mar kasta wuu beddelay weligiis. Ciise waa madaxa sanadka - madaxa ama sayidkiisa waqti kasta, gaar ahaan maxaa yeelay wuxuu abuuray waqti. Waa taambuugeenna oo nolol cusub ayaan ku haysannaa. Bawlos wuxuu qoray: “Haddii qof Masiixa ku jiro waa abuur cusub; duugii hore way dhammaadeen, oo bal eega, wax cusubi waa noqdeen ”(2 Korintos 5,17:XNUMX).
Ciise waa Aadankii ugu dambeeyay. Wuxuu ku guuleystay meeshii ugu horreysay ee Aadan uu ku guuldaraystay. Ciise waa Kormariddeenna, kibista aan khamiirka lahayn iyo dib-u-heshiisiinteenna. Isagu waa kan keliya (iyo keliya) kan dembiyadeenna inaga saara. Ciise waa sabtidayada, meesha aan ka nasanno dembiga. Maaddaama uu yahay Sayidkii mar walba jiray, ayuu hadda inagu dhex nool yahay oo waqtigeenna oo dhami waa muqadas, maxaa yeelay waxaan ku nool nahay nolosha cusub ee aan annaga la wadaagno isaga. Ciisena, Sayidkeenna iyo Sayidkeenna buunanka buunan buu mar uga dhigay!
Ku noolaanshaha wehelnimada Ciise